Inona ny APK ary ahoana ny fampidinana azy amin'ny finday Android | Androidsis
Eder Ferreno | | apk, Tutorials
Ny zavatra mahazatra indrindra dia rehefa misintona lalao na rindranasa amin'ny finday Android isika dia mankany amin'ny Play Store. Izy io dia fivarotana fangatahana ofisialy ho an'ny telefaona miaraka amin'ny rafitra fiasa, ary eo no ahitantsika lalao sy rindranasa maro be alaina. Na dia afaka misintona fampiharana izay tsy ao amin'ny Google Play Store ihany koa izahay. Amin'ireo tranga ireo dia mazàna misintona rakitra APK izahay. Anarana izay efa renao tamin'ny tranga sasany.
Nefa azo inoana fa tsy tena fantatrao hoe inona izany APK izany na ahoana no ahafahana misintona azy amin'ny Android. Noho izany, etsy ambany izahay manazava bebe kokoa momba izany, mba hahafantaranao amin'ny antsipiriany kokoa hoe inona izany ary ahoana ny fampidinana azy amin'ny telefaoninao.
1 Inona no atao hoe APK
2 Ahoana ny fomba fampidinana apk amin'ny Android
3 Fivarotana hafa ho an'ny Google Play
Inona no atao hoe APK
Ny APK dia karazana rakitra izay extension dia .apk. Ireo karazana fisie ireo dia misy lalao na fampiharana azo sintonina sy apetraka amin'ny telefaona Android. Raha ny marina, ny fanafohezana an'ity karazana rakitra ity dia fanafohezana ny Android Application Package. Io no niavian'ireo fanafohezana manome ny anaran'ity sokajin-drakitra ity, izay efa hitantsika matetika tao amin'ny rafitra fiasa efa ela.
Izy io dia endrika famatrarana, mitovy amin'ny endrika hafa toy ny fisie ZIP. Ao anatiny no ahitantsika ny fisie izay ilainay mba hiasa ny rindranasa izay halefanay mazàna amin'ny telefaona Android. Matetika amin'ny mime dia ahitantsika ny rindrambaiko na ny mpanamboatra lalao.
Ny telefaona Android dia afaka misintona rakitra APK, izay tsy dia hita matetika ao amin'ny Play Store. Fa mahita azy ireo any amin'ny magazay fampiharana hafa. Ny tombony azo amin'ireto rakitra ireto dia Ireo dia rindranasa izay tsy hitantsika raha tsy amin'ny Play Store. Na izy ireo dia kinova hafa noho ilay ananantsika ao amin'ny magazay fangatahana ofisialy. Ka tontolo vaovao misokatra miaraka amin'ireo lalao sy fampiharana mahaliana indrindra.
Noho izany, Ny APKs dia mahazo vahana bebe kokoa amin'ireo mpampiasa finday Android. Ho fanampin'izay, raha te-hisintona rakitra misy an'io karazana io dia tsy mila mamaka na manao dingana manokana isika. Zavatra izay tsy isalasalana fa manamora ny fampidinana azy ireo amin'ny telefaona. Manaraka izany dia holazainay aminao bebe kokoa momba an'io lafiny io, izay zava-dehibe tokony horaisina.
Ahoana ny fomba fampidinana apk amin'ny Android
Mba hahafahana misintona rakitra APK amin'ny telefaona Android, dia mila mandeha any amin'ny iray amin'ireo magazay fampiharana hafa izay misy isika. Safidy tsara ny anarana toa ny APK Mirror na UpToDown. Manana lalao sy fampiharana be dia be ao aminy izahay, ankoatry ny safidy azo itokisana. Na dia lafiny iray lehibe aza amin'ireny tranga ireny ny fiarovana, noho izany, tsara ny manatanteraka torolàlana sasany.
Alohan'ny hisintomana rakitra misy an'io karazana io dia mila manatanteraka dingana iray isika, izay misy ny famonoana safidy fiarovana. Amin'ny alàlan'ny default, namboarina ny telefaona Android mba hahafahanao misintona fampiharana avy amin'ny Play Store. Noho izany dia tsy maintsy atsahantsika ity fampiasa ity. Mandeha any amin'ny sehatry ny telefaona izahay ary avy eo mankany amin'ny faritra fiarovana. Tokony hanisy marika ny safidy "fiaviana tsy fantatra" isika ao. Hanana fanamarihana isika, izay tsy maintsy ekentsika. Ary hahafahantsika misintona APK tsy misy olana amin'ny telefaona Android.
Rehefa nahavita an'io isika dia efa afaka manao izany mandehana any amin'ny fivarotana fampiharana ary misintona rakitra APK ho an'ny finday Android. Manana safidy marobe izahay amin'io lafiny io, na dia efa nanonona roa tamin'izy ireo aza izahay, izay azo atokisana indrindra ho an'ireo mpampiasa manana ny rafitra fiasan'i Google.
Rehefa mahita rakitra APK misy lalao na rindranasa mahaliana antsika izahay dia ampidinintsika amin'ny telefaona Android. Manaraka izany, rehefa vita ny fisintomana an'ity rakitra ity dia ny tsy maintsy ataontsika dia ny mitantana azy. Ny dingana mitovy amin'ny rehefa misintona fampiharana amin'ny solosaintsika isika. Tsy maintsy misafidy azy fotsiny isika ary hanomboka ho azy ny mpandefa fampiharana. Ka ny fomba dia tena tsotra ho antsika.
Noho izany dia afaka miandry fotsiny isika ny fametrahana an'io rindranasa voalaza io dia ho vita amin'ny finday Android. Ny faharetan'ity fizotrany ity dia miankina amin'ny lafin-javatra maro, indrindra ny lanjan'ilay APK nakarinay. Saingy afaka minitra vitsy dia ho afaka hankafizintsika amin'ny telefaona izany isika.
Fivarotana hafa ho an'ny Google Play
Ny isan'ny fivarotana fanoloana ireo dia nitombo rehefa nandeha ny fotoana manokana. Manana safidy maromaro misy isika anio, izay ahitantsika lalao sy fampiharana marobe ao amin'ny APK, izay azontsika alaina amin'ny finday Android tsy misy olana.
APK Mirror, UpToDown ary Aptoide no anarana malaza indrindra, ary ahitantsika ireo rindranasa marobe. Ka izy ireo no mety ho safidy tsara indrindra hitodihana amin'ireo tranga ireo. Azo antoka fa hahita APK marobe mahaliana anao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » apk » Inona ary ny fomba fampidinana apk amin'ny finday Android
Ahoana ny fomba hampiasana ny fandikan-teny mandeha ho azy an'ny Google Chrome amin'ny Android